LinkedIn အရောင်း Navigator အသုံးပြုရန်ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန် | Martech Zone
LinkedIn အရောင်း Navigator အသုံးပြုရန်တစ် ဦး ပြည့်စုံလမ်းညွှန်
အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 15, 2020 အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 15, 2020 Stefan Smulders
LinkedIn သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ယင်း၏ Sales Navigator tool ကို အသုံးပြု၍ ဤပလက်ဖောင်းမှအကျိုးအရှိဆုံးကိုရယူပါ။
မည်မျှပင်ကြီးမားသည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည်ဖြစ်စေယနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများအားငှားရမ်းရန်အတွက် LinkedIn အပေါ်မှီခိုနေရသည်။ သုံးစွဲသူသန်း ၇၂၀ ကျော်ရှိသည့်အတွက်ဤပလက်ဖောင်းသည်နေ့စဉ်အရွယ်အစားနှင့်တန်ဖိုးများတိုးများလာနေသည်။ စုဆောင်းမှုအပြင် LinkedIn သည်ယခုအခါသူတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဂိမ်းကိုအရှိန်မြှင့်လိုသောစျေးကွက်သမားများအတွက်ထိပ်တန်း ဦး စားပေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးများကိုတည်ဆောက်ခြင်းတို့မှ စတင်၍ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများက LinkedIn အနေဖြင့်သူတို့၏အလုံးစုံနှင့်အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်ဖြည့်စွက်ဟုယူဆကြသည် စျေးကွက်ဗျူဟာ.
B2B စျေးကွက်အတွက် LinkedIn
အခြားအရာများအပြင် LinkedIn သည် B2B စျေးကွက်အပေါ်အတော်လေးအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းသန်း ၇၀၀ နီးပါးရှိနေခြင်းကြောင့်ယခု B700B စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးရှိသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုကပြတယ် B94B စျေးကွက်၏ 2% သူတို့ရဲ့ content တွေကိုဖြန့်ဝေဖို့ LinkedIn ကိုသုံးပါ။ B2B ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူများနှင့်စီအီးအိုများဖြစ်လာရန်ကြိုးစားနေကြသည် LinkedIn ကိုလွှမ်းမိုး အော်ဂဲနစ်လက်လှမ်းမမီမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်အနေဖြင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်ဇာတ်လမ်းပြောပြရေးသားချက်များဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်။
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်နောက်ကွယ်မှမဟုတ်ပါ။ သူတို့က LinkedIn တွင်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများကိုတည်ဆောက်နေကြသည်။ Sales Navigator, LinkedIn မှကိရိယာတစ်ခု, ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်အောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ LinkedIn Sales Navigator သည်အထူးသဖြင့် LinkedIn ဗားရှင်းနှင့်တူသည်။ LinkedIn သည်လူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်နှင့် ပတ်သက်၍ အတော်လေးထိရောက်နေသော်လည်း Sales Navigator သည်သင်၏နယ်ပယ်တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအလားအလာများကိုရှာဖွေနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာကိုပေးထားသည်။
နောက်ထပ် ado မရှိရင်ဒီ tool နဲ့စတင်ကူညီဖို့အမြန်လမ်းညွှန်တစ်ခုဒီမှာပါ။
LinkedIn အရောင်း Navigator ဆိုတာဘာလဲ။
LinkedIn Sales Navigator သည်လူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်လုပ်ငန်းအတွက်သင့်တော်သောအလားအလာများကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အသုံးပြုသူအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ နက်ရှိုင်းသောစစ်ထုတ်ခြင်းရွေးစရာများကိုသင်အားဖြင့်သင်လိုအပ်သောအလားအလာများကိုရှာဖွေရန်အဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Sales Navigator ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်သော့ချက်ကျသော ဦး ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေ၊ သူတို့လုပ်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသူတို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သောအလားတူအဆက်အသွယ်များကိုရှာဖွေသည်။ ယင်းကသူတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောရောင်းအားရရှိစေရန်ထိရောက်သောပိုက်လိုင်းများတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ဂိမ်းတွင်ရှေ့သို့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာစေသည်။
ခေတ်မီအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများ (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည်) ။ အရောင်း Navigator အသုံးပြုသူများသည်ခေတ်မီအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းများမှအနိုင်ရရှိနှုန်း + ၇% ရရှိသည်။
Sakshi Mehta, အကြီးတန်းကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ၊ LinkedIn
သင်အသုံးပြုမှုကိုမလေ့လာမီ Sales Navigator သည်သင့်အတွက်အမှန်တကယ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမထားကိုကြည့်ရအောင်။
ဘယ်သူက LinkedIn အရောင်း Navigator ကိုသုံးသင့်သလဲ။
LinkedIn Sales Navigator သည်သင် B2B အရောင်းဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကသင်လိုအပ်သည့်အရာအတိအကျဖြစ်သည်။
Sales Navigator သည် LinkedIn ရှိလူတိုင်းအတွက်ရနိုင်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Subscriptions ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်သင့်ကုမ္ပဏီ၏အရွယ်အစားအရတစ် ဦး ချင်း၊ အသင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းပုံစံကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
LinkedIn Sales Navigator သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များကိုရှာဖွေပြီးထုတ်ကုန်ခြောက်ခုကိုမကြည့်မီ၎င်းတို့ထံပြသနာများကိုကွဲပြားစွာမြင်စေရန်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုရှိသည်ကိုနားလည်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Ed McQuiston, VP Global Sales, Hyland Software များ
လူမှုရောင်းအားအတွက် Hyland၊ Akamai Technologies နှင့် Guardian တို့သည် LinkedIn အရောင်း Navigator ကိုမည်သို့အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါ။
LinkedIn အရောင်း Navigator အသုံးပြုနည်း
Sales Navigator ၏အခြေခံ မှစတင်၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဤကိရိယာကိုအပြည့်အဝအသုံးချသည်အထိသင်ရှုထောင့်အားလုံးမှသင်ရရှိသည်။ ဤတွင်သင်ကခြစ်ရာကနေစတင်ပုံကိုပါပဲ။
ပထမဆုံးလုပ်ဖို့ကတော့သင်သွားပါ အရောင်း Navigator စာမျက်နှာ နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင်၏အခမဲ့စမ်းသပ်မှုကိုစတင်ပါ option ကို။ LinkedIn ကသင့်ကိုခွင့်ပြုပါတယ် ရက်ပေါင်း (၃၀) အခမဲ့ရောင်းချခြင်း။ ဒါကြောင့်သင်၏ပထမဆုံးလမှာဒီဟာကိုအပြည့်အဝအသုံးချပါ။
ထို့နောက်သင့်အား Sales Navigator ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပို့လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သူ့ဟာသူမတူညီသော platform တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဒီမှာဘာလုပ်လုပ်သင့်ရဲ့ပုံမှန် LinkedIn အကောင့်ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်ရောင်းလိုသော Navigator အကောင့်ကိုအလုပ်ခေါင်းစဉ်များ၊ ဒေါင်လိုက်များနှင့်သင်ပစ်မှတ်လိုသည့်ဒေသများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ပထမ ဦး စွာ Sales Navigator သည်သင်၏လက်ရှိ LinkedIn ဆက်သွယ်မှုများကို ဦး ဆောင်မှုအဖြစ်သိမ်းဆည်းရန်သင့်အားရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်၏ဆက်သွယ်ရန်နှင့်အကောင့်များအားလုံးကိုတင်သွင်းရန်အတွက် Sales Navigator အား Salesforce သို့မဟုတ် Microsoft Dynamics 365 နှင့်ထပ်တူပြုနိုင်သည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသေးသည် LinkedIn ကိုအခြား app များနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ သင်ကအခြား CRMs အသုံးပြုနေလျှင်။
ဤအချက်မှာသင်သည်သင်၏အကောင့်ကိုစတင်ခြင်း၏ကန ဦး အစိတ်အပိုင်းနှင့်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ ယခုသင်ကုမ္ပဏီများအားရောင်းရန် Navigator အကြံပြုသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအားသင်၏အကောင့်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းကသင့်အားအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုလိုက်နာရန်၊ အသစ်သောလမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းများကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
၎င်းသည်သင့်အားအလားအလာရှိသောဖောက်သည်တစ် ဦး နှင့်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးစကားပြောဆိုမှုမတိုင်မီသင့်အားကောင်းစွာအသိပေးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ မည်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်မည်သည့်အရာကိုသိမ်းဆည်းရမည်ကိုမသိသေးပါကဤအပိုင်းကိုကျော်ပြီးနောက်မှထည့်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်ရှာဖွေနေသည့်မည်သည့်လမ်းအမျိုးအစားကိုမဆိုဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းအတွက်သင်၏ရောင်း ၀ ယ်ရေးဒေသ၊ စက်မှုအကျိုးစီးပွားနှင့်သင်ပစ်မှတ်ထားသောအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
သင်၏အကောင့်ကြိုက်နှစ်သက်ရာများနှင့်လုပ်ဆောင်ပြီးသည်နှင့်နောက်တစ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်သင့်သည်မှာအလားအလာများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့် ဦး ဆောင်မှုစာရင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရိုးလေးနည်းလမ်းကတော့ Advanced Navigator များကိုပေးတဲ့ Sales Navigator ထဲက Lead Builder ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ Sales Navigator ကိုအသုံးပြုသောမည်သူမဆိုအတွက် Lead Builder မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိခြင်းသည်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
သင်၏ရှာဖွေမှုစံနှုန်းများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်သင်သည်အလုပ်အမျိုးအစားများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်ရှာဖွေမှု parameters များကိုသတ်မှတ်ပြီးပါကရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန် Search option ကိုနှိပ်ပါ။ Sales Navigator သည် LinkedIn ၏မူကွဲဗားရှင်း၌သင်တွေ့ရမည့်ထက်သင့်ရလဒ်များအတွက်အချက်အလက်များစွာကိုပေးလိမ့်မည်။
ရလဒ်တိုင်းဘေးမှာ၊ ခဲအဖြစ်သိမ်းဆည်းပါ option ကို။ သငျသညျသက်ဆိုင်ရာအလားအလာကယ်ဖို့ဒီကိုသုံးနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အလားအလာကိုပညာရှိရှိရှာဖွေပါ လင်းနို့ပေါ်မှကျပန်းလူများကိုရွေးချယ်မည့်အစား။
နောက်တစ်ဆင့်မှာအကောင့်တစ်ခုကို ဦး ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာအကောင့်များ သင်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်အမီလိုက်ရန်သင်လိုက်နာလိုသောကုမ္ပဏီများကိုရည်ညွှန်းသည်။
စာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်စက်မှုလုပ်ငန်း၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်၊ စာတိုက်ကုဒ်၊ ကုမ္ပဏီအရွယ်အစား၊ လုပ်သက်အဆင့်နှင့်အတွေ့အကြုံနှစ်မျိုးပါဝင်သည့်စစ်ထုတ်ခြင်းရွေးချယ်စရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ထို့အပြင် Sales Navigator သည် TeamLink ဟုခေါ်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်။ bridged or team connection ကိုကြည့်ရှုရန်သင်၏ရလဒ်များကို filter လုပ်ရန် TeamLink ကိုသုံးနိုင်သည်။ TeamLink သည်သင်၏အလားအလာနှင့်အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး အကြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်မှုကိုသတိပြုမိပါကမိတ်ဆက်ပေးမှုအတွက်သင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်သည်အလားအလာများကို ဦး ဆောင်သူအဖြစ်ထည့်ပြီးသောအခါသူတို့ကို Leads tab တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
4. Filter အရောင်း ဦး စားပေး
သင်၏ Sales Navigator ပရိုဖိုင်း၏ချိန်ညှိချက်များစာမျက်နှာတွင်အရောင်း ဦး စားပေးများကိုအလယ်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပထ ၀ ီအနေအထား၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်ကုမ္ပဏီ၏အရွယ်အစားကို အခြေခံ၍ သင်၏စံပြ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူစာရင်းကိုဤနေရာမှ ဖြတ်၍ ချနိုင်သည်
သင်အလားအလာ၏ပရိုဖိုင်းကိုစစ်ဆေးသည့်အခါတိုင်းဤ ဦး စားပေးချက်များပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် LinkedIn သည်သင်သတ်မှတ်ထားသည့် ဦး စားပေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ ဦး ဆောင်အကြံပြုချက်များကိုလည်းပြလိမ့်မည်။
ဤသည်မှာလက်တွေ့ကျသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက်ထိရောက်သောရှာဖွေရေးကဏ္ feature ဖြစ်သည်။ သငျသညျ ဦး ဆောင်သို့မဟုတ်အကောင့်ဖြစ်စေတစ်ခုခုမှာအဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးကိုလည်း run နိုင်ပါတယ်။ သင်ရှာဖွေရန်သင်လျှောက်ထားနိုင်သောရှာဖွေနိုင်သည့်စစ်ထုတ်စက် ၂၀ ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်သော့ချက်စာလုံးများ၊ ခေါင်းစဉ်၊ ကုမ္ပဏီနယ်ပယ်များနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
၅။ သင်၏သိမ်းဆည်းထားသော ဦး စီးများကိုစစ်ဆေးပါ
Sales Navigator ၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်သင်၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်သတင်းများအားလုံးကိုသင်ခြေရာခံနိုင်သည်။ Sales Navigator ၏ကောင်းသည့်အရာမှာသင်၏ဆက်သွယ်မှုမဟုတ်သောသူများမှပင် updates များကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ သင်၏အလားအလာများအပေါ်ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုအားလုံးနှင့်အတူသင်ပိုမိုထိရောက်သော InMail မက်ဆေ့ခ်ျများ (တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျများ) ကိုရေးနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အသစ်ပြောင်းခြင်းများ၏နယ်ပယ်ကိုကျဉ်းမြောင်းစေလိုပါကစာမျက်နှာ၏ညာဘက်ခြမ်းရှိထိုစစ်ထုတ်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုပါ။ အကောင့်များအကွက်တွင်သင်သိမ်းဆည်းထားသည့်ကုမ္ပဏီစာရင်းကိုတွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက View Account option ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုတွင်သင်သည်လူအများထပ်ဖြည့်ခြင်းနှင့်သူတို့၏ကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်သာမကရှာဖွေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်သင်ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်သောလူများအားကြည့်ရှုရန် 'All Employees' ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏မည်သူမဆိုအချိန်မရွေးသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အတွက်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၏သော့အကောင့်များနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်သင်ချမှတ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာမှာ၎င်းတို့အားသက်ဆိုင်ရာနှင့်အချိန်မီသတင်းစကားများပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ Sales Navigator ၏အကူအညီဖြင့်သင်သည် ၀ ယ်သူ၏ဝယ်သူ LinkedIn ၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်မည်။
မည်သည့်အချိန်တွင်အရောက်သွားပြီး InMails ကိုပို့ရမည်ကိုသင်သိနိုင်သည်။ မက်ဆေ့ခ်ျများကိုကူးယူပြီးအပြုသဘောဆောင်သောဆွေးနွေးမှုများကိုဖိတ်ခေါ်သည့်ပုံစံဖြင့်ပုံစံတစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။ ဒါကလူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်အောင်မြင်မှုကိုလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းမဟာဗျူဟာပဲ။
သို့သော် LinkedIn အရောင်း Navigator တွင်အားနည်းချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ သင်၏ ဦး ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုသင်ကိုယ်တိုင်လက်လှမ်းမီရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်အလွန်အချိန်စားနိုင်ပါတယ်။
ဤအခွန်ကောက်ခံသောအလုပ်ကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏စာပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ LinkedIn အလိုအလျောက်ကိရိယာတစ်ခု၏အကူအညီဖြင့်ဖြစ်သည်။
အားလုံးအလိုအလျောက် tools တွေကိုလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အကယ်၍ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုအာမခံလိုပါကသင်ရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ချဲ့ သင်၏လူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်။ နောက်ဆက်တွဲနှင့်ဆက်သွယ်မှုတောင်းဆိုမှုများအတွက်ပါ ၀ င်သောလုံခြုံရေးကန့်သတ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စီစဉ်ထားသောအလုပ်ချိန်အတွင်းမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ခြင်းနှင့်ဆိုင်းငံ့ထားသည့်ဆိုင်းငံ့ထားသည့်ဖိတ်ကြားခြင်းများကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်သင်၏အကောင့်လုံခြုံမှုကို Expandi ကသေချာစေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်မှန်ကန်သောကိရိယာများသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်များကိုမကျင့်သုံးပါကလူမှုရေးရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ LinkedIn Sales Navigator ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အားထုတ်မှုအနည်းအကျဉ်းနှင့်ကြီးမားသောအလားအလာရှိသောစာရင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ဆောက်နိုင်စေသည်။ ထို့နောက်သင်သည်သင်၏စာရင်းကိုယူပြီး Expandi သို့တင်သွင်းနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်အတွက်သင့်အတွက်အချိန်ကုန်သောလုပ်ငန်းအများစုကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
အရောင်း Navigator မှစ။ 7. Leverage Insights
Sales Navigator တွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာများစွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်မည်ကဲ့သို့မှန်ကန်စွာအသုံးပြုရမည်ကိုသင်သိပါကသင်အလွန်အသုံးချနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်အသစ်ထပ်မံဆောင်ရန်လိုအပ်လျှင် Sales Navigator သည်သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဦး ဆောင်မှုကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။
တဖန်၊ အကယ်၍ သင်သည်အလားအလာကောင်းသော်လည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြင့်မားသော ဦး ဆောင်မှုရှိပါက Sales Navigator ကသင့်အားမှတ်စုများနှင့်တံဆိပ်များကိုဖောက်သည်ပရိုဖိုင်သို့သတ်မှတ်ပေးသည်။ သင်၏ CRM နှင့်လည်းစည်းညှိသည်။
ထို့အပြင်သင်သည် Inbound LinkedIn စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုစိတ်ဝင်စားပါက Sales Navigator ကသင့်အားမြင်သာမြင်သာမှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ပရိုဖိုင်ကိုမည်သူမကြာသေးမီကကြည့်ရှုထားသည်ကိုသင်ကြည့်နိုင်သည် ဤနည်းဖြင့်သင်နှင့်သင့်အဖွဲ့အစည်းကိုမည်သူစိတ်ဝင်စားနေသည်ကိုသင်သိနိုင်သည်။
LinkedIn တွင်, ဖြည့်သူကိုအလားအလာ စိတ်ဝင်စားမှုများ သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းရဲ့အပိုင်းကတကယ်ကိုသင့်ကိုကြီးမားတဲ့မျက်နှာသာပေးနေတယ်။ ဤအခြေခံအားဖြင့်၎င်းတို့သည်သင့်အားခေါင်းစဉ်များစာရင်းတစ်ခုအဖြစ်ပေးသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောသူတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ဦး စားပေးမှုများကိုနားလည်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း၏မြေပြင်
မင်းရဲ့ ဦး ဆောင်မှုကိုဘာတွေစိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတာကိုသိရန်နှင့်သင်၏ထုတ်ကုန်များကသူတို့ရှာဖွေနေတဲ့တန်ဖိုးနှင့်မည်သို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည်တောက်ပသောချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားသူတို့၏ခေါင်းဆောင်များအပေါ်သူတို့၏ချဉ်းကပ်ပုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်မလုံလောက်သောပြိုင်ဘက်များအပေါ်သင့်အားကြီးမားသောလက်လွှဲပေးလိမ့်မည်။
9. အရောင်း Navigator တိုးချဲ့မှု Chrome ကိုထည့်ပါ
၎င်းသည်သင့်အားအချိန်နှင့်ခွန်အားများစွာသက်သာစေသည်။ အရောင်း Navigator ၏ Chrome တိုးချဲ့မှု သင်၏ Gmail အကောင့်မှ LinkedIn ပရိုဖိုင်းများကိုမြင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤတိုးချဲ့ခြင်းသည်သင့်အားရေခဲချိုးချိုးဖောက်သောအကြောင်းအရာများနှင့်လည်းလမ်းညွှန်နိုင်သည်၊ သင့်အတွက် ဦး ဆောင်သူများကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး TeamLink အချက်အလက်များကိုပြသနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ဒီကိုဝေးစွာဖတ်လျှင်၊ သင်မေးချင်သောမေးခွန်းတစ်ခုရှိနိုင်သည်။
LinkedIn အရောင်း Navigator သည်သင်၏ငွေနှင့်ထိုက်တန်ပါသလား။
အတိုချုပ်ဖြေရန်ဟုတ်ကဲ့၊ အသေးစားစီးပွားရေးနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်ယခုအချိန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သည်မဟုတ်သည်ကိုစမ်းစစ်ရန်အတွက်အခမဲ့ဗားရှင်းကိုစမ်းကြည့်သင့်သည်။ သို့သော်ပိုမိုကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရောင်းဝယ်ရေးပိုက်လိုင်းများနှင့်ပိုမိုထိရောက်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်ဤပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
LinkedIn အရောင်း Navigator Demo Expand LinkedIn အလိုအလျောက်
Tags: b2bb2b စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတိုးချဲ့ရှာပါဆောင်နှင့်အလားအလာရှာပါအွန်လိုင်းကိုရှာပါအလားအလာများကိုရှာပါlinkedinlinkedin ရောင်းအားရေကြောင်းပြMicrosoft ဒိုင်းနမစ် 365အရောင်းရေကြောင်းရောင်းသူ
SaaS စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင် LinkedIn Automation /Expandi.io အတွက်ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးဆော့ဝဲလ်ကိုတည်ထောင်သူ ၅ နှစ်ကျော် LeadExpress.nl ကိုတည်ထောင်သူ
Connected Fitness Brand Insights ကိုသော့ဖွင့်ရန် BlueOcean ၏စီးပွားဖြစ် AI ကိုအသုံးပြုခြင်း